Wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo kulamo la qaadatay dhiggeeda dalka Shiinaha “Sawirro” – Radio Muqdisho
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo kulamo la qaadatay dhiggeeda dalka Shiinaha “Sawirro”
Wasiirka wasiirada caafimaadka Soamaaliya marwo Xaawo Xasan Mohamed oo booqaneysa dalka Shiinaha ayaa kulamo la qaadatay dhiggeeda dalkaasi.maewo Li bin.
Labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriir ka labada dal iyo sidii dawladda Shinuhu ay uga kaalmeeyn laheeyd dawladda Soomaaliya arrimaha caafimaadka iyo fayo dhowrka.
Kulanka labada Wasiir oo ka dhacay xarunta wasaradda caafimaadka Shiinaha ee magaalada Beijing, iyadoo wasiiradda caafimaadka Shiinaha ay ballan qaadday taageero dhan walba leh oo ay siineyso dawladda Soomaaliya. Sida in dib loo dhisa dhamaan xarumihii caafimaadka ee dawladda, taageera deg deg ah oo la gaarsiinaayo. Dadka uu ku fatahay wabiga shabelle ee magaalada Jowhar iyo qaxootiga ka soo cararay dalka Yemen.
Wasaaradda caafimaadka Shiinaha ayaa sheegtay in wafdi heer sare ah ay u diri doonto Muqdisho, kaasoo soo qiimeynaya mashaariicda ay dowladda Shiinuhu qorsheyneyso iney ka hirgeliso Soomaaliya.
Kulanka Beijing kadib wasiirka caafimaadka Soomaaliya waxay booqatay gobalka Jilin halkaas oo ay kula kula yeelatay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalkaasi, waxayna aad oogu faraxday diyaar garoowga ka muuqda ardayda Soomaaliyeed.
Dhamaan kulamadaas waxaa goobjoog ka ahaa Qunsulka guud ee safaraada Soomaalida ahna ku simaha safiirka Mohamed Ibrahim Cawale Dr. Charles
Ciyaaro dhex maray Wasiirro iyo Xildhibaanno lagu maamuusayay 15-ka May oo lagu qabtay Muqdisho